Muxuu sharciga ka qabaa in shaqaalaha DF ay xisbi siyaasadeed u ololeeyaan? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu sharciga ka qabaa in shaqaalaha DF ay xisbi siyaasadeed u ololeeyaan?
Muxuu sharciga ka qabaa in shaqaalaha DF ay xisbi siyaasadeed u ololeeyaan?
Muqdisho (Caasimada Online) – Soomaaliya waxa ay u socotaa heerkii ay dowladnimadeedu ku billaabatay oo ah hannanka xisbiyada badan, sidaas awgeed waxaa kadhismaya xisbiyo siyaasadeed oo hordhac u ah kaqaybgalka muwaadiniinta ee siyaasadda iyo hoggaanka dalka.
Habka ay xisbiyadu siyaasaddu u dhismayaan iyo hirgelinta hannaanka xisbiyada badan waxa uu Baarlamaanku ka soo saaray xeerka dhismaha xisbiyada siyaasadda ee Xeer Lr: 19, summadiisu tahay1300/3/1/9/16, soona baxay 27-06-2016
Kaas oo maamulaya dhammaan wixii la xiriira sameynta xisbiyada siyaasadda, waxaana suuragal ah in xisbigii aan xeerkaas raacin ama kusoo baxa hab aan xeerkaas waafaqsanayn uusan xaq u yeelan doonin ka qaybqaadashada siyaasadda.
Sida ku xusan qodobka 11aad ee xeerka dhismaha xisbiyada siyaasadda waxaa jira muwaadiniin aan kaqabgeli karin dhismaha xisbiyada siyaasadda isla markaana aan asaasayaal iyo xubno ka noqon Karin xisbi siyaasi ah, waxa kamid ah Ciidanka, Shaqaalaha maamulka wasaaradaha, Danjirayasha, Shaqaalaha maxkamadaha iyo Garsoorka, Hay’adaha gargaarka ee dowladda iyo guud ahaan shaqaalaha dowladda.
1-Ciidamada Qalabka Sida
2-Garsoorayaasha Maxkamadaha Dalka
3-Hawlwadeenada Safaaradaha (Diplomaasiyiinta)
4-Dhamaan Shaqaalaha dawladda waxaa ka reeban Inuu kamid noqdo saasayaasha ama xubin xisbi siyaasadeed, Inuu ka qeybqaato ololeynta ama dardargelinta hawlaha xisbi iyo kulammadiisa.
Waxaa ka mamnuuc ah inuu muujiyo ujanjeerida xisbi siyaasadeed si oraah ama qoraal ah oo wax u dhimi karta dhexdhexaadnimadiisa.
Haddaba waxa jira shaqaale kashaqeeya Hay’adaha dowladda sida Wasaaradaha, Maxkamadaha iyo Guddiyada madaxa bannaan oo laga yaabo in aanay fahamsanayn in xeerku kareebayo in ay xisbiyo siyaasadeed kamid noqdaan ama u ololeeyaan oo hadda isu diyaarinaya kamid noqoshada xisbiyada siyaasadda ama wada taageero iyo u ololeyn.
Muwaadiniinta ku xusan qodobka 11aad ee xeerka xisbiyada ee aan kaqaybgelin dhismaha iyo ololaha xisbiyada siyaasadda waxa u furan in ay shaqada dowladda katagaan haddii ay doonayaan in ay kaqaybgalaan dhismaha xisbiyada siyaasadda, balse suuragal ma aha in shaqaale dowladda u haya waajibaadka ku xusan qodobkaas uu haddana u ololeeyo kamid noqdo xisbi siyaasadeed oo mucaarad ku ah dowlada bixisa mushaarkiisa.
Haddaba waxa saaran shaqaalaha dowladda ee wada dhismaha iyo olaha xisbiyada siyaasaddu in ay shaqda banneeyaan kahor inta aanay kamid noqon ama u ololeyn xisbi siyaasi ah
W/Q. Axmed Ciise Guutaale